लगानी | गृहपृष्ठ | Page 8
त्रिशक्ति सेक्युरेटिजको विशेष साधारण सभा
on: २ बैशाख २०७६, सोमबार १२:४५ लगानी
वैशाख २, काठमाडौं (अस) । त्रिशक्ति सेक्युरेटिज पब्लिकको विशेष साधारण सभा वैशाख ६ गते कम्पनीको रजिष्टार कार्यालय पुतलीसडकमा हुने भएको छ । कम्पनीको चैत १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विशे...	बिस्तृतमा
एनएमबि माइक्रोफाइनान्सको नाफा ५२ प्रतिशतले वृद्धि
on: २ बैशाख २०७६, सोमबार १२:२८ लगानी
वैशाख २, काठमाडौं (अस) । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको नाफा ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. ३ करोड ३२ लाख पुगेको छ । नाफा गत आवको सोही अवधिमा रू. २ करोड १८ ल...	बिस्तृतमा
०.२१ प्रतिशत बढ्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट)
on: २ बैशाख २०७६, सोमबार १२:१० नेप्से विश्लेषण, लगानी
वैशाख २, काठमाडौं (अस) । २०७६ सालको पहिलो व्यापार दिनमा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २१ प्रतिशतले बढेको छ । पहिलो कारोबारदेखि उकालो लागेको परिसूचक बढेर १ हजार १ सय ८६ विन्दुमा पुगेको छ । यसदिन...	बिस्तृतमा
ग्रामीण विकास लघुवित्त र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको मूल्य समायोजन
on: २ बैशाख २०७६, सोमबार ११:१६ लगानी
वैशाख २, काठमाडौं (अस) । सोमवार दुई कम्पनीको मूल्य समायोजन भएको छ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको मूल्य समायोजन भएको हो । ग्रामीण विकास लघुवित्तको ५० प्रति...	बिस्तृतमा
माउण्टेन हाइड्रो नेपालको मूल्य रेञ्ज
on: २ बैशाख २०७६, सोमबार १०:४९ लगानी
वैशाख २, काठमाडौं (अस) । नेप्सेले माउण्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडको पहिलो कारोबारको लागि रू. ९३ दशमलव ७५ देखी २ सय ८१ दशमलव २५ सम्म मूल्य रेञ्ज तोकेको छ । नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको ला...	बिस्तृतमा
on: २ बैशाख २०७६, सोमबार ०८:१६ लगानी
काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्ममा त्यस्ता कम्पनीले पूर्वाधारमा रू. २ खर्ब ९७ अर्ब लगानी गरेका छन्...	बिस्तृतमा
on: २ बैशाख २०७६, सोमबार ०८:११ लगानी
on: २ बैशाख २०७६, सोमबार ०७:४९ कम्पनी विश्लेषण, लगानी
कम्पनीले कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा रू. ३ करोड ५९ लाख नाफा कमाएको छ । यो गत आवको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशत कम हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. ३ करोड ७८ लाख नाफा कमाएको थियो । पुस मसान्त...	बिस्तृतमा
on: २ बैशाख २०७६, सोमबार ०७:४८ कम्पनी विश्लेषण, लगानी
गत पुस १ गते लक्ष्मी लघुवित्तले पारित गरेको नगद लाभांश लगानीकर्ताहरूको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । कम्पनीले गतवर्षको मुनाफाबाट २६ दशमलव ३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको हो । अघिल्लो वर्ष पनि...	बिस्तृतमा
कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. २ करोड ३ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ६९ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. १ करोड १९ लाख नाफा कमाएको थियो ।...	बिस्तृतमा